Breaking: चितवनमा सुजिता घटना बारे SP ले यसो भने ।। न्यायको लागि महिलादिदी बहिनीहरु तात्तिए !! (भिडियो हेर्नुहोस्) – Khabar28media
Breaking: चितवनमा सुजिता घटना बारे SP ले यसो भने ।। न्यायको लागि महिलादिदी बहिनीहरु तात्तिए !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
July 6, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
चितवनमा सुजिता घटना बारे SP ले यसो भने ।। न्यायको लागि महिलादिदी बहिनीहरु तात्तिए !! (भिडियो हेर्नुहोस्) अन्तिममा छ पुरा हेर्नुहोला !!
नुनको प्रयोग खानको लागि गर्दा लाभ हुन्छ त्यसरी नै नुनले हाम्रो जीवन पनि लाभ नै लाभ दिन्छ भन्ने वास्‍तु विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ।वास्तु विज्ञानका अनुसार नुनमा गजब को शक्ति हुन्छ ।
जसले तपाई हाम्रो घरमा सकारात्मक उर्जाले भरि दिन्छ साथै घरमा सुखसमृद्धि बढाउने काम गर्छ तर यसको लागि नुनलाई खाने मात्र नभई अरु नै तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नु पर्छ।
कसैको दुस्ट नजर लागेछ भने जान्ने ले नुनको प्रयोग गरेर नै झारफुक गरेको तपाई हामीले देखेकै छौँ यसले खराब शक्ति र दोषलाई पन्छाउने काम गर्छ। वास्तु विज्ञानका अनुसार शिशाको कचौरामा नुन भरेर ट्वाइलेट वा बाथरुम मा राख्न सकिन्छ यसले घरको वास्तुदोष हटाउन मद्दत गर्छ किनकि नुन र शीशा दुवै राहु को वस्तु हो !
यसले राहु को नकारात्मक प्रभाव लाई रोक्ने काम गर्छ। राहु नकारात्मक उर्जा र कीटाणुहरुका कारणले पनि सक्रिय हुने भएको ले यसो गर्नाले घरमा सुख समृद्धि र स्वास्‍थ्य सबैमा लाभ हुनसक्छ। शीशाको भाँडामा नुन भरेर घरको कुनै कुनामा राखी छोड्नाले घरमा सकारात्मक उर्जाको उत्पत्ति र संचार हुन थाल्दछ।
राहु, केतु को दशा चली रहेको छ वा मनमा कुनै नराम्रो बिचार या डर पैदा हुन थाल्यो भने पनि हो नुनलाई यसरी प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै, डल्लो नुनलाई रातो कपडामा बेरेर घरको मुख्य प्रवेस द्वारमा झुन्ड्याई दिएमा घरमा कुनै खराब तत्वले प्रवेश गर्न सक्दैन।
चितवनमा सुजिता घटना बारे SP ले यसो भने ।। न्यायको लागि महिलादिदी बहिनीहरु तात्तिए !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
Previous Article पाथिभरा माता को दर्शन गर्दै हेर्नुहोद भोलिको राशिफल , निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
Next Article Tiktok मा भाईरल भुपु-पुलिस जिम्बे राइको सबैलाई रुवाउने कथा, श्रीमतीसँग छुटिदा पागल नै भए !! (भिडियो हेर्नुहोस्)